Vanhu Makumi Maviri neVanomwe Vobatwa neCovid-19 neMusi weSvondo
Bazi rezvehutano rinoti vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika nemusi weSvondo. Vanhu vose ava Havana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika.
Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zvuru gumi nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mana nematanhatu kana kuti 11, 246.
Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zvuru zvipfumbamwe nemazama m,ana nemakumi mashanu remumwe kana kuti 9,451 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri neSvondo
Vanhu vachiri kurwara vave churu chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nemasere kana kuti 1, 488. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri mazana matatu nevanomwe kana kuti 307 sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nemusi weSvondo
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezvuru mazana matatu kana kuti 2, 3 million vabatwa nechirwere checovid-19 muafrica. Vanhu vafa vasvika zvuru makumi mashanu nemashanu zvinemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 55,989.
Vapora vadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million. South Africa ine vanhu vanodarika zvuru mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 860, 900 uye vanodarika zvuru makumi maviri nematatu ane mazana masere nemakumi matanhatu nevana kana kuti 23, 864 vafa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muamerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi.
Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 299, 000, vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nematanhatu kana kuti 16 million.
Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1, 6 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana ane zvuru mazana manomwe kana kuti 47 million.